Glutathione: Iyo yazvino Anti-kukwegura uye Ichenje Madhiragi & Zvekuwedzeredza muna 2020
Glutathione, ingave muma glutathione majekiseni, glutathione kirimu kana zvimiro zvoitika zvaro, ipuroteni yeminiti ine matatu amino acids, iyo cysteine, glutamate, pamwe ne glycine. Kunyangwe glutathione chiri chechisimba chiropa chigadzirwa, zvakare yakakosha kemikari chinhu mumichero, nyama uye miriwo.
Glutathione inotumirwa nemuromo, inhaled, kana kuburikidza nejekiseni kuti idzore danho rayo mumuviri kune akasiyana maitiro ezvipenyu nezvibatsiro. Glutathione inoshanda inoita basa rakakosha mukudzivirira kwemuviri kukurudzira, kurapwa kwechirwere chemapapu, chemotherapy side athari yekuzorodza, nekudzivirira kweropa.
Glutathione anoshanda sei?
Glutathione basa rinouya rinobatsira mune rakateedzana mashandiro anoitika mumuviri wemunhu kupa akasiyana glutathione zvakanaka. Aya maitiro anosanganisira kupindirana kwemuviri kugadziriswa nekuvakwa kwehutu pamwe neprotein nemakemikari kugadzirisa.
Zvakare, inozivikanwa nesimba rayo rakasiyana re oxidation simba, glutathione inovandudza maitiro ayo muviri wemunhu unoshandisa nekudzokorora oxidants akadai mavitamin C uye E, CoQ10 uye alpha lipoic acid.
Ndezvipi zvakanakira Glutathione mumuviri?
Nechiyero chakakodzera che glutathione yekuwedzera kana kugadzirwa kwakawanda mumuviri, munhu anomira mikana yakakura yekunakirwa nehutano hwakasiyana-siyana nekuda kwekupihwa kwakaringana kwemorekuru mumuviri. Kiyi glutathione inobatsira dzinosanganisira:
1.Sezvo ine antioxidant ine simba
Kushungurudzika kweOxidative chinhu chikuru chiri kukonzera kukwegura uye kurwara kwakasiyana-siyana. Izvi zvinoitika apo kugadzirwa kwemahara radicals kunodarika kugona kwemuviri kurwisa aya mahara radicals.
Kana kusanzwisisika kukaitika, iyo yakasununguka miteuro inokuvadza masero emuviri, ichiita zera rimwe nekukurumidza uye rinowanzoitika kune dzakasiyana siyana zvirwere. Zvimwe zvezvirwere zvinogona kuitika nekuda kwekunyanyisa oxidative kusagadzikana zvinosanganisira chirwere cheshuga, kenza, asthma, arthritis uye kusagadzikana.
Nekune rumwe rutivi, kana muviri uine yakaringana maantioxidants akadai glutathione, inokwanisa kurwisa iripo yemahara oxidants. Nekuda kwesimba rayo re antioxidative uye kugona kuvepo mumasero emuviri mune yakanyanya kuwirira. glutathione basa inoshanda kwazvo mukubatsira muviri kurwisa akasiyana mawakisi pamwe nekukuvadza kwavo.
Glutathione detoxify zvinhu zvine chepfu mumiviri yedu. Nekuda kwekudya uye zvimwe zvinhu zvinoshandiswa nevanhu, miviri yavo inokonzeresa hupfu hunokanganisa nhengo dzadzo uye nemaitiro ehutachiona. Kunze kwezvo, muviri pachawo unogona kuburitsa zvine chepfu panguva yekuita kwazvinoita.
Semuenzaniso, muchikamu chekupedzisira chesimba rekugadzira maitiro, muviri unogona kuburitsa superoxide. Kufunga superoxide kune yakawandisa maelekitoni, inogona kuve nehupfu kune masero membrane, DNA, mitochondria, pakati pezvimwe zvinhu zvemuviri pedyo nayo.
Neraki, kana muviri wako uine zvakakwana mazviri, glutathione detoxify uye inoregedza superoxides, ichidzivirira muviri kubva kune yavo inokuvadza mhedzisiro. Mukuwedzera kune superoxides, glutathione inodzimawo uye inoregedza dzimwe mhando dzakawanda dzemamolesi ane muchetura dzinogona kuvapo mumuviri wako.
3.Kuti ganda uye anti-kukwegura
Wese munhu anoda kuve neganda rakakwana. Nehurombo, nekukwegura, maitiro ekushanduka kwehomoni, zvimwe mararamiro zvinhu zvakadai sekushaya hutano uye tsika yekurovedzera muviri, ganda rako rinogona kunge rakapesana nezvaunotarisira. Zvakatonyanya kunetsa, zvinopesana nekukwegura skincare zvigadzirwa zvakadai seyemunyururusi, mafuta uye maseramu zvinogona kuzove zvisingabatanidzi mukuedza kwako kuwana ganda risina mhosva.
Kana ari mamiriro ako azvino, zvinokurudzirwa kuti uedze glutathione yeganda kubudirira.
kuyedza. Glutathione yeganda inoita basa rakakosha mumasero uye mitochondrial basa, uye nekudaro, ine kugona kukurudzira kupodzwa kwemasero emuviri akakuvadzwa anobatsira kukukanganisa kweganda rako.
Kunze kwezvo, glutathione inotsigira kumisikidzwa kwemasero emuviri, uye ino inhanho yakakosha kune kudzorerwa kwehutano hweganda rako.
Yakasiyana-siyana zvidzidzo zvesainzi zvakadzima kugona kwe glutathione yeganda pigmentation uye kukwenya kutaridzika kuderedza. Zvakare, iyo antioxidant yakawanikwa yekuvandudza ganda elasticity. Mhedzisiro yacho ndeye munhu mudiki-anotaridzika ane hutano uye hwakanaka ganda toni uye maitiro.
4.Nokuti uropi uye mwoyo
Nezera repamberi, vanhu vanowanzoona ndangariro dzemhedzisiro semhedzisiro yenyonganiso. Izvi zvinoitika kana huwandu hwakakosha hwehuropi hweuropi hukakuvara kana kufa. Nekuda kweizvozvo, uropi hunodzikira uye haugone kushanda kusvika pakazara basa.
Nehurombo, vanhu havakwanise kutiza kubva kune zvakakonzerwa nemhedzisiro yekukwegura. Kune rumwe rutivi, uye nerombo rakanaka, glutathione supplementation yekuvandudza glutathione mwero mumuviri inogona kubatsira zvakanyanya mukudzosa kana kuderedza maitiro ekukwegura uye zviratidzo uye zviratidzo. Iyo antioxidant inogadzirisa uye inogadzirisa iyo neural tishu yekukuvara chiyero, uye inogonesa kugadzirisa kweiyo yakakanganisika neural tishu.
Mune chidzidzo chakaitwa muna 2017, vaongorori vakaona kuti intranasal glutathione yakabatsira mukuvandudzwa kwe Alzheimer's zviratidzo pakati pevarwere vane mamiriro epfungwa.
Glutathione antioxidant zvakakoshawo moyo wehutano. Izvi pakati peakakosha glutathione inobatsira, uye inodonha kusvika pakukwanisa kweiyo glutathione mamorekuru kurwisa "lipid oxidation" mumuviri.
Chikamu chekutanga chechirwere chemoyo chinoratidzwa neane arterial plaque mumadziro e artery. Ipapo, denda rinoputika, zvichikonzera chipingaidzo kuyerera kweropa. Nekuda kweizvozvo, kurwiswa kwemoyo kana kurohwa.
Neraki, kana iwe uine wakawanda glutathione kugoverwa mumuviri wako, iyo antioxidant inoshanda pamwe neye enzyme inozivikanwa se glutathione peroxidase yekuita inactivate iyo peroxinitrites, peroxides, yemahara radicals, pamwe neiyo superoxide. Kana usingadzoreke, zvese izvi zvinomisidzana zvinopa lipid oxidation izvo zvinokanganisa moyo wako hutano. Naizvozvo, glutathione inobatsira moyo wako nekuidzivirira kubva mukukuvadzwa kunogona kubuda nekuda kwekuvapo kwemakomisheni mumuviri wako.
Glutathione kuzvimba ruyamuro rwekubatsira ndechimwe chinhu chinoita kuti glutathione ive yakakurumbira. Vanenge chero chirwere chisingaperi, kusanganisira chirwere cheshuga, cancer uye chirwere chemoyo, chinoonekwa nekuzvimba.
Kuzvimba kunoitikawo munzvimbo dzakakomberedza muviri. Kunyangwe mhinduro dzehutachiona kazhinji dzinowanzova chikamu chekurapa maitiro, dzimwe nguva dzinogona kupfuurira zvisina basa kwenguva yakareba, zvichikonzera chikonzero che alarm. Apa ndipo apo glutathione kuzvimba kubatsira rubatsiro kunouya kunobatsira.
Zvidzidzo zvakasiyana zvinoti glutathione inowedzera kana iyo mukati-inogadzirwa glutathione mumuviri inodzora kuwedzera uye kuderera kwekuzvimba sekupindurwa kwemuviri. Zvinoshamisawo, mamorekuru e glutathione anowana izvi nekupesvedzera kwemasero machena maseru. Saka nekudaro, ivo vanokona kudzora kutapukira kusingaperi.
6.Kuti immune system
Glutathione chikafu kana glutathione inowedzera upewo muviri wako zvakaringana glutathione mamolekyulu kukurudzira immune system yako. Iine simba rakasimba rekudzivirira muviri, muviri wako unogona kurwisa hutachiona hwakasiyana hutachiona hutachiona nemazvo, nekuda kwe glutathione vitamini c inogona kufanana mukutsigira immune system.
Maererano nezvidzidzo zvesainzi, glutathione inoshanda inovandudza mashandiro emasero machena kunge maseru emhondi pamwe neT masero. Nekuwedzeredza, masero eT anogadzira huwandu hwepamusoro hwezvinhu zvinoshanda kurwisa hutachiona uye hutachiona. Izvi zvinhu zvinosanganisira interferon-gamma pamwe necrleukins-2 uye interleukin-12.
Vatsvagiri mune kumwe kuongorora vakawana kuti glutathione antioxidant yakavandudza mukana wemasero emhondi maseru kuuraya mhuka pathogenic ne200% mushure memwedzi mitanhatu yekushandisa glutathione supplement. Kunze kwezvo, glutathione chikafu uye ma supplements anoita kunge achibatsira zvakananga macrophages kurwisa Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis ibhakitiriya inotungamira kuhutachiona.
Utachiona senge Epstein-Barr hutachiona, chirwere cheLymeitis uye hepatitis zvinogona kudzvinyirira immune system yako. Nekudaro, nekuwanikwa kwakawanda kwe glutathione antioxidant, masoja ekudzivirira emuviri anogona kurwisa zvinobudirira kukurudzira kwechirwere chakadai.
Vatsvagiri vanoratidza kuti pane chakanangana zvakananga pakati peatism uye yakadzika glutathione mazinga. Izvi zvinotevera humbowo hunoratidza kuti vana vane autistic vane yakaderera glutathione mazinga zvichienzaniswa nevana vasina dambudziko.
Neraki, neiyo chaiyo glutathione dosage uye kuomerera kune iyo yekuwedzera, vana vane autism vanogona kuwana zviri nani. Chidzidzo cha2011 chinoratidza kuti glutathione yemuromo inowedzerawo kana majekiseni e glutathione anogona kuderedza mamwe maitiro e autism.
Glutathione kenza kubatsirwa ndechimwe chinhu chinoita kuti nyanzvi dzehutano dzisimbise kukosha kwe glutathione yakakwana mumuviri wemunhu. Maererano nekumwe kuongorora kwakawanda, izvo glutathione cancer yekudzivirira cancer inoonekwa. Izvi zvidzidzo zvinopa kuti glutathione mehendi inobatsira mukudzivirira kwechirwere chegomarara.
Kune zvakare imwe glutathione cancer cancer. Dzimwe nyanzvi dzehutano dzinopa majekiseni e glutathione kune varwere vane cancer senzira yekudzivirira iyo yakaipa chemotherapy mhedzisiro.
Vanhu vari kunetseka nemudumbu mafuta kana kufutisa vanogona zvakare kuzadzisa zvinangwa zvavo zvehuremu nekudya glutathione chikafu kana kutora glutathione supplement. Muzhinji, chepfu uye mahara radicals zvichikonzerwa nehuremu hwekabhesi uye kunwa shuga ndizvo zvakakonzera kufutisa uye dumbu mafuta.
Kunyanya kunwa kweimwe yevaviri kunoita kuti muviri uchengetedze mafuta mazhinji uye kupisa makoriori mashoma. Nekudaro, iwe unowedzera uremu, uye pamwe nedumbu rako rinowana huwandu hwakawanda hwemafuta. Kana ikasiyiwa isingatariswe, kufutisa kunogona kukonzeresa zvirwere zvinotapukira senge kenza.
Neraki, majekiseni e glutathione anoshanda seVitamin D, B12 uye D mukubatsira muviri kuburitsa chepfu. Glutathione michina inotsigira muviri kupisa macalorie nemafuta, nekudaro inosimudzira kuonda uye zviri nani chimiro chemuviri.
10.Nekuda kwePasiral Vascular Disease
Peripheral Vascular Disease mamiriro ehutano ayo anokonzerwa nekuvhara kweanoputika artery. Inonyanya kubata makumbo. Glutathione inogona kubatsira iwe kudzivirira chirwere ichi nekuvandudza kutenderera kweropa mumuviri wako wese.
Kana iwe uchitova nechirwere, glutathione pamuromo kana jekiseni manejimendi anogona kudzoreredza zviratidzo nekuda kwekuvandudzwa kweropa. Nekuomerera kune yakakodzera glutathione dosage, ichave ichingori nyaya yenguva usati watanga kufamba usati wanzwa chero kurwadziwa.
Kuita zvemitambo zvakare kuri pakati glutathione inoshandisa. Zvidzidzo zvakawana kuti glutathione inogona kuvandudza mashandiro evatambi kana iye anoshandisa glutathione yekuwedzera isati yatanga mutambo wenhabvu.
Mune kumwe kuongorora, varume vasere vakapihwa zviuru zvegumi zvegutathione vasati vatanga mutambo wemitambo. Ivo vamwe varume vaishandiswa sevatori vechikamu pachiitiko vakaiswa pane placebo.
Pakupedza mutambo wemitambo, vatsvagiri vakaona kuti boka rakawana glutathione supplement rakanyatsoita zvakapetwa pane boka re placebo. Iyo yekutanga yakasangana nekuneta kushoma uye yakaderera huwandu hweropa lactic acid sekuenzaniswa neyokupedzisira. Kazhinji, yakakwira lactic acid mazamu mumuviri inowedzera kuneta, inogadzirisa kushomeka kweropa uye kukonzera tsandanyama maronda uye nyaya dzekufema.
Glutathione poda iyo yakagadziriswa kuva inodyiwa glutathione jekiseni kana inowedzera inodzivirira mumhanyi kubva pazvinhu zvakadaro. Izvi zvinovabatsira kuti vaite zvirinani mukushanda kwavo nemakwikwi.
12.Kwe chirwere cheshuga
Muzhinji, chirwere cheshuga kana chisingaperi shuga yeropa inosanganiswa nekushomeka kwe glutathione
mumuviri wemunhu. Iyo yakakwira shuga mazinga inogona kukonzera oxidative kusagadzikana iyo inotungamira kune kukuvara kwematoni.
Sevanhu vakadaro vanorwara nechirwere cheshuga vangazowana chinoshamisa chiratidzo chekugadzirisa pamusoro pekushomeka kwavo glutathione. Mhinduro inoshanda yeizvi yakagadziriswa glutathione yemuromo inonwa nekutora glutathione chikafu kana glutathione inowedzera. Neimwe nzira, ivo vanogona glutathione majekiseni zvakare anogona kushandiswa kugadzirisa kushomeka kwe glutathione.
Dzimwe fundo dzinoratidza kuti kuchengetedza yakaringana ye glutathione mumuviri inogona kubatsira mukuzorodza kwezviratidzo zvechirwere cheParkinson. Chirwere ichi chinokanganisa kutendeka uye mashandiro echirongo chetsinga, zvichiita kuti munhu asangane nezviratidzo sekubvunda uye kubatana kwemajoini.
Vanotsvaga vauya nezvakawanikwa zvinoratidza kuti glutathione basa ingangodaro iri kurapa kwekudzikisa zviratidzo zve Chirwere chePalinson. Nekudaro, hapana humbowo hwakakwana kuratidza kuti glutathione nemuromo kuwedzeredzwa kunogona kuve kwakachengeteka uye kunoshanda mune izvi. Kumwe kutsvakiridza kuri kuenderera mberi kuona kushanda kwayo uye kuchengeteka kwe glutathione yemuromo yekuwedzera.
Kuve akakosha intercellular oxidant, glutathione kirimu inogona kuwedzera hutano hwebvudzi rako. Glutathione kuzvinyaradza kusunungura ibhenefiti huru iyo avo vanonzwa scalp kuzvimba iyo inotungamira mukusuwa kwebvudzi.
Kunze kwezvo, kana iwe uchida kudzivirira kutemwa nevhudzi rako, iwe unofanirwa kuve neshuwa kuti unochengetedza hutano hwe glutathione nhanho mumuviri wako. tsvagiridzo inoratidza kuti glutathione kushomeka kunosimudzira bvudzi kuchena. Iyo glutathione nzira yekukwanisa kuita izvi inosanganisira kudzivirira oxidation kusagadzikana kuburikidza ne detoxization uye kusagadzikana kweo oxidants.
Ndivanaani vanoda Glutathione? Chii chinowanzoitika kipimo?
Wese munhu anoda glutathione yekubata kwakakwana kwemuviri, kudzivirira chirwere uye kutaridzika uine hutano uye uchitaridzika.
Nekudaro, vechidiki vane kushomeka kwe glutathione uye avo vari pazera rechikuru vanoda glutathione supplementation kuti vadzivise kana kuwana zororo rekusakwana kwezviratidzo / kukanganisa. Ivo vanogona kutora glutathione inowedzera pamuromo kana kuburikidza nemajekiseni.
Panguva ino, hapana humbowo hwakakwana hwesainzi yekumisikidza chaiyo glutathione dosage. Nekudaro, vatsvaguriri vakasarudzira zvine hutano kune imwe glutathione dosage yeiyo chaiyo mamiriro ekurapa. Huwandu uhu hunotsamira pazvinhu zvakasiyana senge zera, murume kana mukadzi uye nhoroondo yekurapa yemunhu. Naizvozvo, glutathione dosage inosiyana kubva kune mumwe munhu kuenda kune mumwe, kunyange pakati pevarwere vane yakajairika mamiriro ekurapa.
Sei kuwedzera Glutathione yedu?
Pane nzira dzakasiyana siyana dzaungakudza glutathione mwero mumuviri wako. Mune mhaka iwe usina kuomesa glutathione kushomeka, kudya glutathione-hupfumi hwekudya kunofanirwa kukubatsira kukunda kushomeka. Zvimwe zvezvikafu zvaunogona kutarisira pachinangwa ichi zvinosanganisira miriwo (kabichi, sipinachi, broccoli, Brussel inomera), walnuts, matomatisi, matango, chives, gariki uye nyama ichangobikwa. Tsvagiridzo inoratidza kuti zvikafu izvi zvakapfuma mune glutathione.
kunwa yakawanda mvura isingagumi (anenge makumi mashanu neshanu zuva rega rega), kurara kwemaawa manomwe kusvika masere pazuva rega / husiku, kudzivirira kushushikana, uye kurovedza muviri zvishoma mazuva mashanu vhiki rega rega kuchabatsira muviri wako kuwedzera simba rayo rekugadzira glutathione.
Imwe nzira yekuwedzera glutathione mwero mumuviri wako iri kutora glutathione zvinowedzera. Aya ma supplements anogona kutorwa pamuromo kana sejekiseni. Ivo vari kunyanya kubatsira kwazvo kuvanhu avo vakasimbiswa kuve ne glutathione kushomeka. Izvo zvinowedzera zvinowanikwawo nenzira yemakrisimasi apo dzimwe dzakagadzirirwa (intravenous) IV application.
Chii chinokonzera glutathione kushomeka?
Glutathione kushomeka zvinowanzoitika nekuda kwezvinhu zvakasiyana. Imwe ndeye kuchembera. Yako glutathione level inoramba ichiderera sezvaunokura. Zvidzidzo zvinoratidza kuti kugadzirwa kwe glutathione mukati memasero emuviri wemunhu kunoderedza mwero wegumi muzana muzana rega rega pamakore gumi kune munhu anenge awana kana kudarika makore makumi maviri.
Chinhu chechipiri ndechekushaiwa hutano hwakanaka. Kukundikana kudya huwandu hwakaringana hwe glutathione-hupfumi hwekudya (manomwe kusvika mapfumbamwe masevhisi e organic veggies uye michero zuva nezuva) zvinotungamira kune yakaderera kuwanikwa kwe glutathione mumuviri wako.
Zvimwe zvinhu zvinobatsira mukushomeka kwe glutathione zvinosanganisira kushushikana kusingaperi, kusagadzikana, kushushikana, kunyanyisa kurovedza muviri uye kusvibiswa kwezuva. Kufumurwa nezvinhu zvine chepfu uye zvinokuvadza zvakadai seacetaminophen, mishonga yekuuraya zvipembenene, benzopyrenes uye makemikari ekuwachisa pamba ndoimwewo chinhu.
Kune here chero glutathione mativi?
Parizvino, hapana humbowo hwakakwana hwesainzi glutathione mativi. Kunyange zvakadaro, kumwe kuongorora kwevashandisi kunoratidza kuti glutathione mhedzisiro inogona kukunda, asi mune zvisingawanzoitika. Maererano nekutarisazve, mune dzimwe nguva, munhu anogona kuona tsvina, mapundu kana kutumbuka mushure mekutora glutathione supplements. Neraki, yakawanda yeiyi glutathione mhedzisiro ine hunyoro uye inopera mushure menguva pfupi yakaenzana.
Kana iwe uri asthmatic, zvinokurudzirwa kuti unzvenga inhaled glutathione. Kushandisa iyi fomu ye glutathione kunogona kukonzeresa kusagadzikana mumuviri wako. Zvakare, vanotarisira uye vanoyamwisa vakadzi vanorayirwa kuti vasashandise glutathione supplements kuti vadzivise zvingangodaro zvakakurisa glutathione madhara.
Glutathione mamiriro azvino uye kushandiswa mumusika
Glutathione inowanikwa seRakaderedzwa Glutathione (GSH) kana Oxidized Glutathione (GSSG) mumusika. Vakasiyana-siyana vezvinodzvinyirira zvinodhaka zviremera zviremera zvakabvumidza kutengeswa nekutenga zvese zviri zviviri zve glutathione, asi pasi pemamwe mamiriro nemamiriro.
Glutathione poda ine runyorwa rwezvikumbiro. Kunze kwekushandiswa mumishonga yemishonga, vazhinji vanogadzira vanoita glutathione poda kutenga kuti vashandise sechinhu chakakosha mune chikafu, zvigadzirwa zvehutano uye cosmetics.
Ndekupi kwatinogona kuwana Glutathione?
Iwe unogona kuwana kubva kune glutathione chikafu chakapfuma mariri kubva kumusika wako wemunharaunda wakasima kana gadheni. Kana iwe uchida glutathione poda kana glutathione supplements, ingave glutathione madhimoni, mapiritsi, mhinduro, mahwendefa, manyuchi kana masvosve, iwe unogona kuzvitora kubva kuchitoro chako chemishonga kana chitoro chiripo nezvekudya zvinowanikwirisa munharaunda mako.
Nekudaro, inonyanya nzvimbo nzvimbo yekuwana glutathione poda kana glutathione supplements iri pa internet. Kune akawanda epamhepo zvinodhaka kana ezvekudya zvekuwedzera zvitoro zvaunogona kutarisira nezve nekukurumidza kutenga glutathione. Nekudaro, iwe unofanirwa kuve neshuwa kuti uri kubata nemutengesi akavimbika wepamhepo pasati mari yachinja maoko. Izvi zvinoshanda kunyange kana iwe uchida kugadzira a glutathione poda kutenga.
Glutathione chinhu chinoshanda chekudzivirira cheti isu tese chatinoda mumiviri yedu. Glutathione detoxify zvinhu zvine chepfu mumiviri yedu uye inoita basa rakakosha mukudzora kana kutodzosera kumashure kukwegura. Iyo inopa huwandu hwakawanda hwehutano hwakanaka, kusanganisira cancer yekudzivirira uye chirwere cheParkinson chiratidzo chiratidzo. Iwe unogona kuwana glutathione kubva kune chaiwo chikafu kana kubva glutathione poda zvinowedzera zvinowanikwa pazvitoro zvepamhepo uye zvepamhepo zvinodhaka / zvekudya zvekuwedzera.
Glutathione ipuroteni yeminiti ine matatu amino acids, iyo cysteine, glutamate, pamwe glycine. Ichi chinyorwa chinotarisa glutathione inobatsira, inoshandisa, mhedzisiro uye dosage. Iwe unozoona zvakare kwaunowana glutathione.
Deponte, M. (2013). Glutathione catalysis uye maitiro maitiro e glutathione-inotsamira enzymes. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) -General Subjects, 1830(5), 3217-3266.
Noctor, G., Mhamdi, A., Chaouch, S., Han, YI, Neukermans, J., Marquez ‐ Garcia, BELEN,… & Foyer, CH (2012). Glutathione mune zvinomera: iyo yakasanganiswa yekutarisa. Dyara, sero & nharaunda, 35(2), 454-484.
Owen, JB, & Butterfield, DA (2010). Kuyerwa kweiyo oxidized / yakaderedzwa glutathione ratio. In Mapuroteni akasarudzika uye kushushikana kwepamoyo mune chirwere uye kukwegura (map. 269-277). Humana Press, Totowa, NJ.
Ribas, V., García-Ruiz, C., & Fernández-Checa, JC (2014). Glutathione uye mitochondria. Frontiers mune chemacology, 5, 151.
Smeyne, M., & Smeyne, RJ (2013). Glutathione metabolism uye chirwere cheParkinson. Yemahara Radical Biology uye Mushonga, 62, 13-25.
Traverso, N., Ricciarelli, R., Nitti, M., Marengo, B., Furfaro, AL, Pronzato, MA,… & Domenicotti, C. (2013). Basa re glutathione mukuenderera mberi kwekenza uye chemoresistance. Oxidative mushonga uye cellular kureba, 2013.
RUTEZO RWOKUDYA (70-18-8)
1.I chii Glutathione?
2.Ho Glutathione anoshanda sei?
3.Ndezvipi zvakanakira Glutathione mumuviri?
4.Ndani anoda Glutathione? Chii chinowanzoitika kipimo?
5.Kuita sei kuwedzera yedu Glutathione?
6.Chii chinokonzera kushomeka kwe glutathione?
7.Ave paine chero glutathione mhedzisiro?
8.Glutathione mamiriro azvino uye kushandiswa mumusika
9.Kupi kwatinogona kuwana Glutathione?